Aza afangaro ny business sy ny sosialy
jeudi, 27 août 2020 13:15
Izaho olona mpandraharaha, ary tsy misy sentiment na resaka fanampiana ny fandraharahana, le client est roi raha mandoa vola izy, raha tsy mandoa vola dia tribunal, huissier, saisie no resaka.
Le bon compte fait des bons amis en business, tsy midika fa hanao toetra ratsy akory izany, fa mety misy ady varotra, arrangement payement, fa rehefa nifanaraka dia samy mitazona ny teniny.
Zavatra matetika mpitranga ny hoe, niadian'ny client varotra 200 000ar ilay entana na ilay asa, nefa tsy nomenao azy, nefa avy eo entinao restaurant indray izy handanianao 300 000ar, efa resaka samy mpinamana indray iny, na tafiditra amin'ny politique de fidélité gros client.
Ny banky fampindramam-bola dia business fa tsy sosialy, ka aza afangaro ny resaka, raha te hanao asa sosialy dia mitadiava vola dia omeo izay sahirana. Ny olona sahirana tsy ampindramim-bola, satria anampy trotraka ny fahasahiranany izany, fampahantrana azy izany.
Aoka ny orinasa no ampindramim-bola ka hamokatra ampidirany mpiasa miasa, na terena izay orinasa ampindramim-bola tsy akana zana-bola hapakatra ny karaman'ny mpiasany, na ilay zana-bola tsy naloany 15-20% iny ihany aza.
Ozinina STAR: Miverina mihodina ny Antsirabe rehefa niato iray volana
Akinwumi Adesina: Voafidy fanindroany ho filohan’ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana »